Nezvedu - Yantai Jiajia Instrument Co., Ltd.
YANTAI JIAJIA Midziyo CO., LTD.
Yantai Jiajia Instrument Co, Ltd inoenderera ichitsvaga uye kugadzira matekinoroji matsva mukuyera indasitiri. Kubva pane nyowani, iri nani uye yakanyatsoita tekinoroji, Jiajia ari kuyedza kugadzira yakanakisa uye inehunyanzvi timu, kuti ibudise yakachengeteka, yakasvibirira, yakawanda hunyanzvi uye chaiyo inorema zvigadzirwa. Inotarisirwa kuve mutengesi chiratidzo chehuremu zvigadzirwa.
Netsika dzekambani “Ruzivo rwunopa musiyano. Mafungiro ndiwo anosarudza zvese. ” , Jiajia akaramba achitsvaga zero kukanganisa muhunhu hwechigadzirwa, zero chinhambwe mukushandira, zero zvichemo zvevatengi sechinangwa.
Yakasimba kudzora maitiro ekugadzira uye zvigadzirwa zvakakwana, Jiajia ichapa yakanaka & yakavimbika sevhisi, kutaurirana kwechokwadi uye edza kuve shamwari yevatengi vese. Nemafungire akakomba uye akakwana, Jiajia anozove iwo muenzaniso mukuyera indasitiri.
Jiajia inozivikanwa muR & D, kugadzirwa uye kushambadzira kwehuremu zvigadzirwa zvinosanganisira zviyero zvemarori, zviyero zvekuyera, kuyera sisitimu.
Zviyero zvese zveindasitiri mumatanho ese uye mafomati, software yekudzora uye kuongorora maitiro ekugadzira anogona kuwanikwa pano. Izvo zvinobatsira kusimudzira kugadzirwa uye mhando nemhando yega yega yemhinduro senge kugadzirira, kuverenga uye kumwe kunyorera.
Zvigadzirwa zvedu zvinogona kuwanikwa mune yega yega mhando yeindasitiri senge kurongedza, logistics, yangu, chiteshi, kugadzira, murabhoritari, supamaketi etc.
Nemakore anoda kusvika makumi maviri ekugadzira ruzivo uye mainjiniya mainjiniya ehunyanzvi, JIAJIA inogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi zvigadzirwa zvakajairika uye zvigadzirwa zvakagadzirwa.
Makore angangoita makumi maviri ezve kutengeserana zvekunze ruzivo, ruzivo rwekunze uye kutumira kunze maitiro uye zvinodiwa, zvinogona kukupa iwe nyanzvi kuraira uye maonero.
Nyanzvi dzekutengesa zvikwata mumitauro mitanhatu dzakasiyana dzinogona kutaurirana nevatengi pasina zvipingaidzo. Zvimwe zviri nyore, nekukurumidza uye nekunzwisisa kwakakwana kwevatengi zvinodiwa
Kuchengeta Misa, Calibration Zviyero zveDhijitari Scales, Scale Kuchengetedza Kurema, Sheuri Beam Load Cell, Kuyera Kurema Set, Certified Weights,